Ny vidin-tsika dia azo ovaina arakaraka ny famatsiana sy ny tsena hafa. Handefa anao ny lisitry ny vidiny nohavaozina aorian'ny nifandraisan'ny orinasanao anay raha mila fanazavana fanampiny.
Ho an'ny santionany dia 7 andro eo ho eo ny fotoana itarihana. Ho an'ny famokarana betsaka, ny mitarika fotoana dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Ny fotoana itarihana dia nanjary nahomby rehefa (1) nahazo ny petra-bolanao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao izahay. Raha tsy mandeha amin'ny fe-potoana farany ny fotoananay, azafady mba andefaso ny takiana amin'ny varotrao. Amin'ny tranga rehetra, hiezaka izahay hanome izay ilainao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Eny, mampiasa fonosana fanondranana avo lenta foana izahay. Ampiasainay ihany koa ny famonosana loza mitatao ho an'ny entana mampidi-doza ary ny mpandefa fitehirizana mangatsiaka voamarina ho an'ny entana mora tohina amin'ny hafanana. Ny fonosana matihanina sy ny takiana famonosana tsy mahazatra dia mety mitaky fiampangana fanampiny.
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ny entana. Ny Express matetika no haingana indrindra nefa koa ny fomba lafo indrindra. Amin'ny ranomasina no vahaolana tsara indrindra amin'ny habetsaky ny be. Ny tahan'ny fandefasana entana marina dia tsy afaka omenay anao raha toa ka fantatray ny antsipirian'ny vola, ny lanja ary ny fomba. Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Manolotra serivisy labozia manokana ve ianao?
Eny, azonay atao ny manamboatra ny fanganao manokana amin'ny vokatra sy fonosana. Mila mandefa anay ny sary famantarana logo fotsiny ianao, mazàna ny sary hosodoko Adobe Illustrator tany am-boalohany sy ny sary PDF dia hanao izay mahomby indrindra amin'ny fanaovana pirinty.
Mpivarotra volomaso, Fanitarana volomaso, eyeliner, lipgloss, kapoka mink, Volomaso maso,